Hantida kirada - MyProperty.so
Hantida kirada For Rent
Waa Guri cusub oo dabaq ah, wuxuu ka soo horjeedo Xalane Gate, Airportiga Muqdishu. Waa Guri noqon kara Safarad, NGO, Jamacad, Isbitaal, Hotel ama Guest House.
Wuxuu dhisma ahaan ka kooban yahay 9 Qol, 7 musqul, 2 kushiin heer sare loo qalabeeyay. Qol iyo musqul service ah, Parking area aad u weyn. Qiimaha Kirada bishii waa $2,500 Iyo Heshiis.
Wixii Faahfaahin dheeri ah, Kala soo xiriir Kirosom
#Tell: 0612 922 241
Updated on January 3, 2018 at 3:42 am
Hello, I'm interested in [Hantida kirada]
Hantida kirada - Wadajir M.C.H, Baidoa, Somalia
Hello, I'm interested in[Hantida kirada]